NATO oo dhiseysa cudud ciidan oo ka dhan ah Ruushka – The Voice of Northeastern Kenya
NATO oo dhiseysa cudud ciidan oo ka dhan ah Ruushka
Star FM October 26, 2016
Isbahaysiga NATO ee uu hogaamiyo Mareykanka ayaa maanta billaabay cadaadis uu dalalka xubnaha ka ah ku saarayo in ay gacan ka geystaan dhismaha cudud ciidan oo loogu tala galay in ay u babac dhigto dhaqdhaqaaqyada Milatary ee dalka Ruushka.
Waxaa la filayaa in la dhiso waax ciidan oo fadhigeedu noqon doono xuduudda Ruushka uu la waado dalal ku yaalla Qaaradda Africa, waxaana tallaabadaan ay noqon doontaa tii lagu dhisay ciidankii ugu baaxadda weynaa ee ka dhanka ah Ruushka, wixii ka dmabeeyay markii lasoo af jaray dagaalkii qaboobaa ee aduunka.
Gaashaan buurta NATO ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waday wixii ka dmabeeyay markii uu Ruushka sanadkii 2014-ki goostay gobolka Crimea ee ka tirsanaa dalka Ukraine.
Xiisadda cusub ee ka dhex taagan Moscow iyo NATO ayaa cirka isku shareertay kadib markii uu Milatariga Ruushka ku biiray dagaalka ka socda Syria, si uu gacan u siiyo dowladda Syria ee la dagaalameysa xoogaga mucaaradka.
← Gambia oo xiriirka u jareysa maxkamadda ICC
Wasiirka caafimaadka oo gacan ka geysanaya baaritaan ku aadan fadeexad lala xiriiriyay wasaaradiisa →